Basathwele kanzima abesifazane - Bayede News
Ibukeka ingathi shu imizamo kaHulumeni kuleli yokuqeda nya izigameko zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane njengoba sihlala sikhuphuka nsuku zonke isibalo sokushaywa kwabo.
Lokhu kubukeka kufake enkulu ingcindezi ebuholini bezombangazwe njengoba sekuvele ukuthi isifundazwe iKwaZulu-Natal sibalwa nezihamba phambili kuleli ezibhekene nengcindezi yokungehli kwesibalo sokushaywa kwabantu besifazane.
UNdunankulu wesifundazwe iKwaZulu-Natal, uMnu uSihle Zikalala, kuthiwa ukudalule lokhu emhlanganweni wesigungu esiphezulu sesifundazwe lapho edalule nezikhumulo zamaphoyisa esifundazweni okufanelwe zisizwe ngokuthi zibe sezingeni eliphezulu lokukwazi ukubhekana nezigameko zodlame kwabesifazane.
Uthe zibalelwa kumashumi amathathu izindawo ezinesibalo esiphezulu sokushaywa kwabesifazane futhi phakathi kwazo kukhona nesifundazwe iKwaZulu-Natal.
Uthe izindawo ezibukeka ziyinkinga ngamacala okushaywa kwabesifazane iKwaMashu, eMlaza, eMpangeni, Osizweni naseNtuzuma. Kulo mhlangano bekukhona noNgqongqoshe Wamaphoyisa kuleli uMnu Bheki Cele obephelezelwa nguMphathiswa Wamaphoyisa esifundazweni iKwaZulu-Natal uMnu Bheki Ntuli Kanye noKhomishana Wamaphoyisa uGeneral Khehla Sithole.
“Kuyinto esobala ukuthi kukhona ukungaziphathi kahle kwabesilisa esifundazweni yingakho kufanele sisukume sibambisane silwe nalo mkhuba owakha isithombe esibi kakhulu ngesifundazwe sethu” usho kanje.
Ethula inkulumo yakhe uKhuzeni uthe sebeqale izindlela zokubhekana ngqo nalo mkhuba nokuthi-ke sebexoxisene namaphoyisa ukuthi akhuphule amasokisi kumacala okuhlukunyezwa kwabesifazane ngoba kuyisihlava esingabekezeleki esibonakalisa ukungakwazi ukuziphatha kwabesilisa okuyibona obekufanele ukuthi bavikela abesifazane. “Lokhu sizokwenza ngokuthi iziteshi zethu zamaphoyisa zibe nezindawo zokuhlinzeka ngosizo oluphuthumayo kulabo abafika kuzo beyovula amacala” kusho uKhuzeni.
Uthe phakathi kwezinhlelo ezimqoka abazolwa ngazo nalesi sihlava ukuqinisa ukusebenza baphinde bahlinzeke ngezinsiza iziteshi zamaphoyisa ezibukeka zikhungethwe kumbe zinamacala amaningi okuhlukunyezwa kwabesifazane avulwe kuzo.
Lezo ziteshi kubalwa kuzo iPlessislaer, iDurban Central, uMlaza, Inanda, iNtuzuma, iPhoenix, iKwaMashu, iMariannhill, iVerulam, iCato Manor neKwaMakhutha.
Uphinde wathi bazoqinisekisa ukuthi bahlala beluqaphile udaba lokubulawa kosopolitiki njengoba elakuleli lilungiselela ukhetho loHulumeni bendawo ngonyaka ozayo. Uphinde wathi izibalo zobugebengu ziveze obala ukuthi ukungaziphathi kahle kwabantu kakukho ohlangothini olulodwa lokuxhashazwa kwabesifazane kepha indaba nje ehlangene nokwephula umthetho kufanele ithathelwe phezulu.
Uthe okunye okubenza bangalali obehlayo izinkinga ezikhulayo ezikhungethe imingcele yakuleli okubalwa kuyo iMozambique kanye neBotswana.
Ukugcizelele ukuthi izinkinga zobugebengu kakufanele kube ezamaphoyisa kuphela nabantu ababambe iqhaza ekusebenzisaneni namaphoyisa noma ngayiphi indlela yokuqinisekisa ukuthi ubugebengu buyaphela kuleli. “Ukuthuthuka kanye nokushintsha kwezwe lethu kusezandleni zabantu balo ukuthi bona yini abayenzayo ukuqinisekisa ukuthula kube izwe elibalwa naphambili ukuheha izivakashi anye nabatshalizimali,” usho kanje.